Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny LATAM dia efa ho avo roa heny ny sandan'ny entana amin'ny 2023
Ny fitomboan'ny fiaramanidina mpitatitra entana 11 ka hatramin'ny 21 dia ahafahan'ny sampana mpamokatra entana entin'ny LATAM Group manitatra sy manamafy ny fahafahany, avy sy ao Amerika atsimo, ary mametraka ny Vondrona ho vondrona mpiasan'ny mpitatitra entana betsaka ao amin'ny faritra.
Nampahafantatra ny Vondrona fa misy fiaramanidina roa fanampiny nampiana ny drafitry ny fiovam-po misy fiaramanidina valo nampahafantarina tamin'ny volana martsa
Ny fiaramanidina vaovao dia hitondra ny fiaramanidina hatrany amin'ny 21 767-300 Boeing converted Freighters amin'ny 2023
Ny LATAM Group dia handray fiaramanidina miovaova efatra eo anelanelan'ny 2021 sy 2022, miampy fiaramanidina enina hafa eo anelanelan'ny 2022 sy 2023
LATAM Group dia nanambara ny fanitarana ny fitomboan'ny sambo mpitatitra entana izay kasainy hampidirina mpitatitra Boeing 10-767 300 Boeing niova fo afaka telo taona ho avy. Izany dia hitondra ny haben'ny fiaramanidina hatrany amin'ny 21 mpitatitra entana amin'ny 2023. Ny fiaramanidina voalohany dia antenaina hanomboka hiasa amin'ny Desambra 2021.
Ny drafitry ny firoboroboan'ny sambo mpitatitra entana ao amin'ny vondrona voalohany dia nahitana baiko fiovam-po miisa efatra niaraka tamin'i Boeing ary safidy efatra hafa hanovana. Roa volana taorian'ny fanambarana voalohany, Vondrona LATAM dia nampiasa ny safidy efatra, fiaramanidina valo ary ny fiovam-po an'ny Boeing 767-300ER roa fanampiny. Midika izany fa ny fiaramanidina mpitatitra entana dia ho feno 21 ny fiaramanidina amin'ny faran'ny 2023. Rehefa vita ny drafitra, ny vondrona dia saika hitombo avo roa heny ny fahaizan'ny mpitatitra entana ary koa hampihena ny salan'isan'ny sambo antonony hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 14 taona.
"Ny fanapaha-kevitra hanitatra ny sambon-tsika dia mifototra amin'ny fahafaha-mitombo manintona misy, fanatsarana farany mahomby sy fanalefahana natolotry ny mpitatitra entana Boeing 767F. Noho ireo singa ireo dia mino izahay fa hivoatra amin'ny fomba mahomby, na dia miatrika toe-javatra mitovy amin'ireo niatrika talohan'ny areti-mandringana aza. Ity fanitarana ity dia hahafahan'ny zanaky ny entan'ny LATAM hanohy hamaly ny filan'ny mpanjifanay sy hanohana ny fitomboan'ny harinkarena amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny fampitomboana sy ny fanatsarana ny fifandraisana ", hoy i Andrés Bianchi, CEO LATAM Cargo.
Ny fitomboan'ny fiaramanidina mpitatitra entana 11 ka hatramin'ny 21 dia ahafahan'ny sampana mpamokatra entana entin'ny LATAM Group manitatra sy manamafy ny fahafahany, avy sy ao Amerika atsimo, ary mametraka ny Vondrona ho vondrona mpiasan'ny mpitatitra entana betsaka ao amin'ny faritra. Ny fiaramanidina valo voalohany dia natokana ho an'ny tsena izay manakiana ny ampahany lehibe amin'ny mpanjifa.
“Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny drafitra dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'i Amerika Avaratra sy atsimo. Manokana, hamafisina ny fahafaha-miasa avy any Kolombia sy Ekoatera hanohana ny indostrian'ny fanondranana voninkazo. Hamafisina ihany koa ny sidina fanampiny hanohanana ny fanondranana sifona salmon ary koa ny fifamoivoizana amin'ny fanafarana firenena. Hiakatra ihany koa ny fahafaha-mandeha sy avy any Brezila rehefa mampiditra làlana avy any Amerika Avaratra sy Eropa isika, izay mampisondrotra ny tsena fanondranana sy ny fanafarana ”, hoy i Kamal Hadad, talen'ny Network and Alliances an'ny LATAM Cargo.
Nanampy i Hadad fa ny fahafahan'ny fiaramanidina mpitatitra entana dia hanampy ny LATAM hanombatombana safidy maromaro. "Ohatra, ny fiovam-po roa fanampiny dia azo ampiasaina hamelombelona ny sambo misy ankehitriny na hanombohana tetikasa fitomboana vaovao. Mbola manana fotoana handraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany ny Vondrona ", hoy izy namarana.
Nanambara ihany koa ny LATAM fa hampiasa ny sasany amin'ireo 767-300ER izay miandry ny fiovam-po amin'ny endrika hybrid hahasoa ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy. Ny seza dia hesorina amin'ny fiaramanidina telo ho an'ity tanjona ity mba hananana karama hatramin'ny 46 taonina isaky ny sidina. Ny roa amin'ireo fiaramanidina ireo dia efa miasa. Ny iray fahatelo dia antenaina ho hita amin'ny telovolana faharoa 2021.
Ankoatr'izay, ny LATAM dia manatsara ny iraisan'ny sambo mpamokatra 767-300 sy ireo mpitatitra entana niova fo mba hampitomboana ny fahafaha-manao, anisan'izany ny fahaizana mitatitra entana marefo.